निर्मताहरुको हेपाहा प्रवृत्तिको र दुर्ब्यवहार बारे अभिव्यक्त गर्न पाइन्न र ? « Media for all across the globe
निर्मताहरुको हेपाहा प्रवृत्तिको र दुर्ब्यवहार बारे अभिव्यक्त गर्न पाइन्न र ?
साम्राज्ञी आरएल शाह
जो-जसलाई सम्बन्ध छ ! हालै नेपाली सिने जगतका एक वरिष्ठ कलाकार,निर्माता र निर्देशक ज्युले एक नव कलाकारले सामाजिक संजालमा दिएका अभिव्यक्ति प्रती आपत्ती जनाएर आफुले पनि सामाजिक संजालमा गर्नुभएको प्रतिक्रिया सन्दर्भमा !
के एउटा नवप्रवेशी कलाकारले आफ्ना शुरुको संघर्षका दिनहरूमा भोग्नु पर्ने अदृश्य उत्पीडन, वास्तविक अप्ठ्याराहरु र आफुलाइ मै हु भन्ने निर्मताहरुको हेपाहा प्रवृत्तिको र दुर्ब्यवहार बारेमा अभिव्यक्त गर्न पाइन्न र ? त्यस्ता वास्तविकता हरुलाइ कसैले आफ्नो प्रतिष्ठाको बिषय बनाउनु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ !
यदि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाइ बिकास गर्ने हो भने सबै निर्माताहरुले आफुलाइ मै हु भनी भावना नराखी नव कलाकार प्रती गरिने ब्यवहारमा सुधार गर्नु पर्छ। साथै समुहगत स्वार्थ राखी स्थापित कलाकार प्रति पक्षपात ब्यवहार र गुटबन्दी गरी फिल्महरु खेल्न नदिइ फिल्मी क्षेत्र बाटै पलायन गराउने षड्यन्त्र बाट मुक्त समेत हुनु पर्छ ! होइन भने यस क्षेत्रलाई नै क्यारिएर बनाएर यस क्षेत्रमा आउन खोज्ने पढे-लेखेका र योग्य कलाकारहरुको खडेरी हुने र स्थपित कलाकारहरु बिस्थापित हुनेको लर्को लामै हुन्छ ! तसर्थ सबैले आ-आफ्नो भुल स्वीकार गरि आफ्नो कमि कमजोरीहरु लाई मनन गरि त्यसमा सुधार गरीअघि बढ्नु जरुरी छ ! साथै संबंधित निकायले निष्पक्ष रही यस बारेमा गम्भीरता पुर्वक सोच बिचार र अध्यन गर्नु पर्ने नितान्त आवश्यक छ !